Bogyoke Aung San Movie | Beta: 2015
၂၀၁၅ ခုနှစ် ၊ သြဂုတ်လ (၅) ရက်နေ့တွင် ဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ ရုံးခန်း၌ “အောင်ဆန်း” ရုပ်ရှင် ဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့နှင့် Synthesis Production House အဖွဲ့တို့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွင် အသုံးပြုမည့် ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် တွက်ချက် အတည်ပြုရန်အတွက် စတင် တွေ့ဆုံခဲ့ကြသည် ။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသော ဦးမင်းထင်ကိုကိုကြီး ၊ ကိုဝိုင်း ၊ ကိုသူရကျော် ၊ ဒေါ်အိအိခိုင် ၊ ဒေါ်ထွန်းအိန္ဒြာဗို နှင့် Synthesis Production House မှ ဒေါ်ဆွေဇင်ထိုက် ၊ ကိုစိုးသီဟ တို့ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည် ။
ယနေ့ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ၊ ဇူလိုင်လ ၊ (၁၉)ရက်နေ့ ၆၈နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရုပ်ရှင်ဖြစ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ဝင် များသည် ဆရာတော်အရှင်ဆန္ဒာဓိက သီတင်းသုံးရာကျောင်း၌ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်တကွ ကျဆုံးလေပြီးသော အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်းကြီး များအား ရည်စူး၍ သင်္ကန်းအစရှိသော လှူဖွယ်ပစ္စည်းများ ဆပ်ကပ်လှူဒါန်းခြင်း ၊ အမျှအတန်းပေးဝေခြင်း များ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည် ။ အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသော ဦးအရိုင်း ၊ ဦးမင်းထင်ကိုကိုကြီး ၊ ကိုသူရကျော် ၊ ဒေါ်ထွန်းအိန္ဒြာဗို ၊ ဒေါ်ကြည်ဖြူသျှင် တို့စုပေါင်း၍ လှူဒါန်းမှုကို ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ ကြသည်။
တနင်္သာရီတိုင်း ၊ လောင်းလုံမြို့နယ် ၊ သင်္ဘောဆိပ်ပြင်ကြီးမှ လူငယ်များ ဦးစီး၍ ကျင်းပသော ဗိုလ်ချုပ်ရာပြည့် အမှတ်တရ ပထမအကြိမ် စာပေဟောပြောတွင် ရရှိသော ရံပုံငွေ ၅သိန်းကျပ် ကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ရှင်ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် လာရောက်လှူဒါန်းခဲ့ကြပြီး ဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့မှ ဒေါ်အိအိခိုင် က လက်ခံပေးခဲ့သည် ။
၂၀၁၅ခုနှစ် ၊ မေလ ၊ (၃)ရက်နေ့တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ရှင်ဖြစ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ ၅/၂၀၁၅ အစည်းအဝေးအား ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ရှင်ဖြစ်မြောက်ရေး ရုံးခန်း၌ ကျင်းပခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးတွင် ရုပ်ရှင်ဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ မှ အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသော ဦးဇာဂနာ ၊ ဦးစိမ်းနီ ၊ ဦးမော်လင်း ၊ ဦးမင်းထင်ကိုကိုကြီး၊ ဦးလူမင်း ၊ ဦးအရိုင်း ၊ ဦးဇော်သက်ထွေး ၊ ကိုဝိုင်း ၊ ကိုသူရကျော် ၊ ဒေါ်အိအိခိုင် ၊ ဒေါ်ထွန်းအိန္ဒြာဗို နှင့် ဒေါ်ကြည်ဖြူသျှင် တို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များ ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ရှင်ဖြစ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ သို့ ဒါရိုက်တာမောင်မျိုးမင်း(ရင်တွင်းဖြစ်) ဦးဆောင်သည့် နှင်းဆီ အငြိမ့်အဖွဲ့ မှ ဖေဖော်ဝါရီ(၉) နှင့်(၁၀)ရက်နေ့ တို့ တွင် ကပြခဲ့သော ရန်ပုံငွေ အငြိမ့်ပွဲ မှ ရရှိငွေ(၇၆၇)သိန်းကို ယနေ့ လှူဒါန်းပါသည်။ လှူဒါန်းပွဲ နှင့် ဂုဏ်ပြုပွဲကို တော်ဝင်ဂါးဒင်း ဟိုတယ်မှာ ယနေ့ မနက် ၁၀နာရီ တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
နှင်းဆီအငြိမ့်အဖွဲ့အားဂုဏ်ပြုအခမ်းအနား နှင့် စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲ
၂၀၁၅ခုနှစ် ၊ မတ်လ ၊ (၅)ရက်နေ့တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ရှင်ဖြစ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ ၄/၂၀၁၅ အစည်းအဝေးအား ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ရှင်ဖြစ်မြောက်ရေးရုံးခန်း၌ ကျင်းပခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးတွင် ရုပ်ရှင်ဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသော ဦးမင်းထင်ကိုကိုကြီး၊ ကိုဝိုင်း၊ ဒေါ်အိအိခိုင် ၊ ဒေါ်ကြည်ဖြူသျှင်နှင့် ဧည်သည်တော်အဖြစ် ဦးထင်ကျော်တို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး နှင်းဆီအငြိမ့်အဖွဲ့အား ဂုဏ်ပြု ပွဲပြုလုပ်ပေးရန်နှင့် ရှေ့ဆက်၍ အလှူငွေလက်ခံရန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
အောင်ဆန်းရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးအတွက် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ရှင်ဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့မှ ဗိုလ်ချုပ်နှစ် ၁၀၀ ပြည့်အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် နှင်းဆီအငြိမ့်ဖြင့် ရန်ပုံငွေကပြဖျော်ဖြေခဲ့ရာ စုစုပေါင်း ငွေကျပ် ၆၇၄၉၁၅၀၀ နှင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၈ ၊ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀ ရရှိခဲ့ပါသည် ။ နိုင်ငံအ၀ှမ်းမှ အောင်ဆန်းရုပ်ရှင်အတွက်ပါဝင်လှူဒါန်းလိုသူများက ဧရာဝတီဘဏ်စာရင်းများမှတဆင့် လှူဒါန်းခဲ့သောငွေပမာဏမှာ ယနေ့ ၁၈.၂.၂၀၁၅ လက်ရှိအချိန်ထိ ၄၃၀၈၄၈၅၀ ကျပ်ရရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် လှူဒါန်းငွေ ၂ရပ်ပေါင်းမှာ ၁၁၀၅၇၆၃၅၀ ရရှိခဲ့ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ကြေငြာအပ်ပါသည် ။
“အောင်ဆန်း” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများ ပူးပေါင်းပါဝင်လှူဒါန်းခြင်းဖြင့် ဂုဏ်ယူနိုင်ကြပါပြီ ။
အောက်ပါ ဖုန်းနံပါတ်များ သို့ ဆက်သွယ် လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။
ဧရာဝတီဘဏ်တွင် ဖွင့်ထားသော အောက်ပါငွေစာရင်းများထဲသို့ ပေးပို့ထည့်ဝင် လှူဒါန်းနိုင်ပါသည် ။
Current Account No . 0080102010003230
Saving Account No . 0080202010022689
နိုင်ငံတကာမှ လှူဒါန်းလိုသူများ အနေဖြင့် Western Union Bank မှ တဆင့် ဧရာဝတီဘဏ် Bogyoke Aung San Film Funding ငွေစာရင်းထဲသို့ ပေးပို့ထည့်ဝင်လှူဒါန်းနိုင်ပါသည် ။
Labels: ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း, သတင်း
ယနေ့ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ၊ ဖေဖော်ဝါရီ (၁) ရက်နေ့ ၊ နံနက် ၉ နာရီတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ရှင် ဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ မှ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရာပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ကြီးမှုးကျင်းပမည့် “အောင်ဆန်း” ရုပ်ရှင်ဖြစ်မြောက်ရေး ရန်ပုံငွေ “အောင်ဆန်းသူရိယနှင်းဆီ” အငြိမ့် စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲ ကို TAW WIN GARDEN HOTEL (Grand Ball Room )၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ ပါသည် ။ “အောင်ဆန်းသူရိယနှင်းဆီ” အငြိမ့် ကို ဒါရိုက်တာမောင်မျိုးမင်း(ရင်တွင်းဖြစ်) မှ ဦးဆောင်၍ အနုပညာရှင်များစွာ ပါဝင် ကြမည် ဖြစ်ပြီး ၉.၂.၂၀၁၅ မှ ၁၀.၂.၂၀၁၅ ထိ ည ၇နာရီ အချိန် နှစ်ရက် တိုင်တိုင် ရန်ကုန် ၊ မြို့မကျောင်းလမ်း ရှိ အမျိုးသားကဇာတ်ရုံတွင် ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပါသည် ။ “အောင်ဆန်း” ရုပ်ရှင် Teaser ကိုလည်း အများပြည်သူအား ပြသနိုင်ရန် အပြီးသတ် တည်းဖြတ်နေပြီ ဖြစ်ပြီး “အောင်ဆန်း” ရုပ်ရှင်အတွက် ရန်ပုံငွေများ ထည့်ဝင် လှူဒါန်းလိုပါက ဧရာဝတီဘဏ် Current Account No . 0080102010003230 ၊ Saving Account No . 0080202010022689 ၊ နိုင်ငံတကာမှ ဆက်သွယ်လှူဒါန်းလိုသူများ အနေဖြင့် Western Union Bank မှ တဆင့် ဧရာဝတီဘဏ် Bogyoke Aung San Film Funding Account နှင့် အလှူငွေလက်ခံမည့်ဖုန်းနံပါတ် 09 25709 3200 ၊ 09 25709 3300 ၊ 09 25709 3400 တို့ကိုလည်း ဆက်သွယ် လှူဒါန်းနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည် ။
နှင်းဆီအငြိမ့်အဖွဲ့အားဂုဏ်ပြုအခမ်းအနား နှင့် စာနယ်...
“ အောင်ဆန်းသူရိယနှင်းဆီ” အငြိမ့် စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်...